Imicrosoft Excel | January 2022
Eyona > Imicrosoft Excel
ukugqwesa kulungiselela konke
I-Excel icwangcisa zonke - isisombululo esisebenzayo
/ Ndiyinyusa njani i-cell padding kwi-Excel? Xa ufuna indawo eyongezelelweyo phakathi kweseli kunye nomda weseli ekhohlo okanye ekunene, cofa “Ekhohlo (Indent)” okanye “Ekunene (Beka ngaphakathi) Cofa kwindawo ethi “Distributed (Indent)” ukuze kubekho isithuba esilinganayo phakathi kokubhaliweyo kunye nemida yeseli kumacala omabini. Kwibhokisi 'ye-Indent', khetha ubungakanani bendawo yakho eyongeziweyo.
Ngaba kukho umsebenzi wokudibanisa kwi-Excel? Abantu abaninzi bafuna ukutolika idatha abayifakileyo ngeDagra kwiMicrosoft Excel. Ngelishwa i-Excel ayiboneleli ngokudibanisa kodwa kukho indlela elula.
Indawo yokufaka ibalasele
Indawo yokufaka ibalaseleyo-imibuzo eqhelekileyo
I-Excel frozen mac-indlela yokuhlala
Ndiyilungisa njani i-clipboard kwi-Excel? Umyalezo malunga nengxaki kwibhodi eqhotyoshwayoBonisa iFayile yeFayile kwiribhoni kwaye ucofe iqhosha lokukhetha kwicala lasekhohlo lesikrini. I-Excel ibonisa ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko ye-Excel Qinisekisa ukuba ikhethwe ngokubanzi kwicala lasekhohlo lebhokisi yencoko. (Jonga uMzobo 1) Cima i-Live Preview ibhokisi yokukhangela kwaye ucofe ku-OK. Qala kabusha i-Excel. 17 mrt. Ngo-2018
Ndiyenza njani i-histogram kwi-Excel 2010? Yenza i-histogram usebenzisa i-Excel's Analysis ToolPakOkuthebhu yeDatha, kwiqela loHlahlozo, cofa iqhosha loHlolo lweDatha, kwidayalog yoVavanyo lweDatha, khetha i-Histogram kwaye ucofe u-OK. Kwifestile yencoko yababini be-Histogram, yenza oku kulandelayo: ... Cofa Kulungile, kwaye uphonononge itafile yokuvelisa kunye negrafu ye-histogram: 11 mei 2016
Susa iliso elidweliswe kwimibuzo kunye neempendulo
indlela yomtyibilizi ibalasele
Ndiwusebenzisa njani umxholo wobunzulu kwi-Excel? Vula uxwebhu olutsha kwaye phantsi koYilo, okanye imenyu eyehlayo kwimenyu, khetha kwaye ubeke itshekhi kwibhokisi ethi, 'Nika amandla uHlaziyo loMxholo.' Ifestile iya kuvula ibuze ukuba uyafuna na ukuvumela iOfisi ukuba iqhagamshele kwi-Intanethi, khetha 'Kulungile' 3 feb. Ngo-2018
umrhumo obalaseleyo kwi-mac
I-Subscript excel mac - uthatha njani isigqibo
Ndibutshintsha njani ubungakanani bebhokisi yokujonga? Unokuseta ubungakanani bebhokisi yokukhangela ngokusebenzisa ububanzi beCSS kunye neepropathi zokuphakama. Sebenzisa ubude bepropathi ukuseta ubude bebhokisi yokukhangela kunye nobubanzi bepropathi ukuseta ububanzi bebhokisi yokujonga.
Ngaba i-Excel inayo itemplate yeshedyuli? Njenge-timesheet kwi-Excel, iiyure ezipheleleyo, iiyure eziqhelekileyo kunye neeyure ezingaphezulu kwexesha zibalwa ngokuzenzekelayo. ... Le template yamaxesha anokukunceda ukulandelela ukusebenza kakuhle kunye nemveliso yamaqela ngaphakathi kwenkampani yakho okanye iyunithi yeshishini.
I-Excel 2010 encryption - iimpendulo eziqhelekileyo kunye nemibuzo
Yeyiphi i-encryption esebenzisa i-Excel? IOfisi 2016 (Ukufikelela, i-Excel, i-OneNote, i-PowerPoint, iProjekthi kunye neLizwi) isebenzisa i-AES engama-256, i-SHA-1 hash algorithm, kunye ne-CBC (yeCipher Block Chaining) ngokungagqibekanga.